Slackware 14.2 iri padhuze kupfuura nakare kose | Linux Vakapindwa muropa
Slackware 14.2 iri padyo kupfuura nakare kose
Kunyangwe isiri kugoverwa kune zviitiko zvikuru kana chirongwa chakamisikidzwa, hachisi kana kutenderera, Slackware inoenderera mberi ichienderera mberi nekuvandudza kwayo. Mazuva mashoma apfuura takaona kuti zvakauya sei kwatiri iyo yechipiri beta yeSlackware 14.2, inotevera vhezheni yeSlackware inozo gadziridza kugovera zvizere.
Pakati pezvinhu zvitsva zvatinogona kuona muSlackware 14.2 ndiko kubatanidzwa kwezvose zvakagadziriswa nevashandisi kubva pashanduro yakagadzikana uye yekutanga beta vhezheni. Chinhu chakanaka sezvo chichiwedzera kugadzikana kana zvichikwanisika mukuparadzirwa. Isu takaonawo zvishoma nezvishoma Slackware 14.2 inosanganisa yazvino vhezheni yepakeji yayo. Saka tinogona kuona kuti Firefox 44 iripo, Pidgin 2.10, Gparted 0.25, SeaMonkey 2.39, Coreutils 8.25, nezvimwe ...
Slackware 14.2 ichave nesu munguva pfupi
Kana iwe uchida kuyedza Slackware 14.2, mune izvi link Iwe uchawana iyo diski mifananidzo yeiyo 32-bit vhezheni uye iyo 64-bit vhezheni. Kuburitswa kweshanduro yakagadzika kuchiri kusazivikanwa, asi zvese zvinoratidza kuti ichave nekukurumidza kupfuura nakare kose, nekuti iyo vhezheni inopa kugadzikana kukuru uye yakawanda yakagadziridzwa software
Slackware haina kuzivikanwa nekuve neakanyanya-kusvika-zuva kugovaniswa, chii chimwe, kukura kwayo kwakaita kunge kwakamira kare kare Asi kwaingova kunyepedzera sezvo zvave kuitika kwenguva yakareba. Uye idzodzo inhau huru sezvo pamwe naGentoo, Debian uye RedHat, Slackware yaive yekutanga kugoverwa kuvapo uye imwe yeakasununguka kwazvo yaivepo, kunyangwe yaive isiri yemunhu wese.
Para uchishandisa Slackware inoda ruzivo rwakakura, asi zvinoita sekunge nhasi, padiki padiki, dambudziko iro rakagadziriswa uye chero mushandisi anogona kurimisa nekurishandisa, kunyangwe hazvo risingade Ubuntu kana Linux Mint. Kunyangwe zvese Slackware 14.2 iri padyo uye zvirokwazvo anopfuura mumwe chete achashamisika painobuda Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Slackware 14.2 iri padyo kupfuura nakare kose
Zvingave zvinonakidza kutaura nezve "quasi-yepamutemo" Rarama vhezheni yekuparadzira. Yakagadzirira kurodha uye kushandisa vhezheni.
Pindura ku 51114u9
Rarama slackware nhasi uye mune ramangwana kukwesha zvese izvo systemd inotakura.
Pindura kune regent
Haizove ne software nyowani asi ndeimwe yematunhu akatsiga uye inoita mutsauko pakati pevamwe.
dunhu rinodya vanhu!
Pindura Mariano Rajoy
Slackware anga aneni kubvira vhezheni 12.2, mushure mekushandisa akati wandei distros ndakagara nayo nekuda kwekugadzikana kwayo uye kunyangwe ivo vasingazvitende, iko kureruka kwekuichengeta ichivandudzwa pasina kurasikirwa nekudzikama uye kuti vanongogadziridza izvo zvinodiwa kuti uvandudze mashandiro uye kuchengetedzeka uye kunyangwe maturusi ekugadzirisa mapakeji (slakcpkg pamwe neslackpkgplus, sbopkg uye kuwedzera kwe slackbuilds) hazvigadzirise kutsamira asi zvinoita kuti kuiswa kwezvirongwa nemapakeji kuve nyore.
Uye kunyangwe vazhinji vakafunga kuti budiriro mushanduro yayo yakagadzikana yakanga yamira, mune yazvino vhezheni vhezheni uye mapakeji matsva aigara achiedzwa.
Vashandisi veSlackware vanovimba kuti tinogona kunakidzwa neiyi distro kwemakore mazhinji anouya.
Iye anoti: "Haisi kana kutenderera relese ..." (sic), zvichijekesa kuti chinhu chakadai chingamiririra mukana. Chekutanga pane zvese, inofanirwa kujekeswa kuti iyo pfungwa yekuburitsa kuburitsa haisi chimwe chinhu kunze kwezita nyowani kuti gadzira chekare fashoni, iyo Debian isina kugadzikana uye Slackware yazvino, pakati pevamwe, anga achiteedzera kwemakore mazhinji. Chechipiri, kuva (kana kwete) kuburitsa kuburitswa kunongokwezva mune imwe nharaunda, iyo yemushandisi wedesktop uyo anoda kugara achifambirana, achibayira kana zvichidikanwa kudzikama kwesisitimu. Kuburitswa kwekuburitsa, kusagadzikana, ikozvino, kubuda ropa kumucheto kana chero zvainodaidzwa, zvirinani, hazvikurudzirwe pamaseva erudzi rupi zvaro.
Inoti: "Pamwe naGentoo, Debian neRedHat, Slackware ndiyo imwe yemagove ekutanga kuvepo ...". Inofanirwa kujekeswa kuti Slackware iri, panguva ino, yekuparadzira kwekare yeGNU / Linux ichiri kushanda, uye sezvineiwo yakafanana neUnix. Debian uye RedHat vari zvakare mune iyo "nhoroondo" chikamu. Gentoo, pakuenzanisa, iri yekuparadzira kwazvino kwakawanda, ini pachangu ndanga ndichishandisa Linux kwemakore apo Gentoo yakaonekwa, uye pamberi payo paive nevamwe vazhinji, mamwe achiri kushanda, seSuSE (nhasi OpenSUSE), Mandrake naConectiva (gare gare Mandriva uye nhasi Mageia), uye akati wandei mamwe mashoma anozivikanwa, saka Gentoo haikwane mubhegi rimwe chete.
Iye anoti: "Kuti ushandise Slackware iwe waida ruzivo rwakawanda, asi zvinoita sekunge nhasi, zvishoma nezvishoma, dambudziko iro rakagadziriswa ...". Chekutanga pane zvese, inofanirwa kujekeswa kuti ichi hachisi "dambudziko" rekuparadzira, asi hunhu, hunofambidzana nenyaya yekuti kuiswa, kumisikidzwa uye kuiswa kwemapakeji hazvibatanidzwe ne graphical interface, uye kuti ivo inoitwa mu "mameseji modhi", kana kunyanya kushandisa ncurses, iyo kune vakawanda haisi dambudziko chete, asi mukana. Uye kwete, iro "dambudziko" harina "kugadziriswa." Neraki, Slackware inoramba ichokwadi kune yayo KISS (Chengeta Icho Chakareruka Benzi) uzivi.
Chekupedzisira, isu tinofanirwa kuwedzera kune iyo runyorwa rwe mapakeji ataurwa, iyo Linux Kernel 4.4.1
Sergio, ruzivo rwako runoita kunge rwakarurama kwazvo kwandiri. Kunyanya nezve kuburitsa kuburitswa, kwandiri pachangu ndiyo mukana wakakura weSlackware.
Ndinoomerera pane zvaunotaura, ndinofunga kuti zvinokonzeresa chikamu che "dambudziko" iro slackware rakaoma riri mukati maro pakuziva kuti nhasi "vepakati" vevashandisi vane, nhasi avo avo nema distros senge slackware vari vanhu vavakatoyedza mamwe ma distros ayo akatanga nechimwe chinhu cheshamwari rudzi rwekuti pane chimwe chikonzero vanobheja pane "inozivikanwa" distros.
Kana ini ndaifanirwa kutaura kusagadzikana kweiyo distro kwaizove kushomeka kwemagwaro, kunyangwe paine zvakakwana, ichiripo.
Semuenzaniso, ini ndaona kuti distros senge arch yakwanisa kuvaka inonakidza wiki muSpanish iyo isinganetsi haikwanise kuita izvozvi. Kunyangwe ruzivo painternet muChirungu rwazara, izvo zvinoenderana nemaitiro angu zvinonetsa pane imwe nguva.
Pindura kuna avrah
Ndine urombo nekukanganisa, yaive 4 mangwanani pandakanyora komendi, ndinovimba inonzwisiswa. XD
Iyo poindi yaunotaura nezvekushomeka kwemagwaro muchiSpanish ndeyechokwadi chaizvo, zvisinei, paunosvika pakuziva iyo linux nyika iwe unoona kuti dzakawanda mhinduro dzeDebian, tsvuku ngowani, suse kana zvimwe zvinoshanda kune slackware. Uye zvakanyanya kukosha, urikusvika pakuziva Linux. Ehezve, izvo hazvisi zvemunhu wese uye Slackware haizove yakawanda yekugovera asi ini ndinonzwa kufara nezvazvo.
PMatrix Angelo akadaro
Ini ndinoda Slackware MUTAI.
Pindura PMatrix Angelo
Ini ndaive mushandisi weSlackware uye senge chero kugoverwa kune zvayakanakira nezvayakaipira. Inoenderera kuve nenharaunda yevashandisi vanofarira maficha ayo uye kugadzikana. Ndakaisiya nekuti ini ndanga ndisingachafarire yayo isingabatanidzi uye semi-yakavharwa modhi yekuvandudza, zvakare kuti haina kunyanya kushanda padanho rekugadzira uye kuisa pamachina mazhinji. Kubva pakuona kwangu zvinoratidzika seyimba desktop desktop uye madiki maseva. Ndiri kufara kuti Slackware inoenderera ichiburitsa vhezheni nyowani.
Pindura kuna Hen
Linux kernel sosi kodhi inoratidza zvimwe zvakavanzika zve AMD Zen